I-Seychelles yoKhenketho kunye neQatar Airways Yabelana ngoPhuculo oluNtsha neMithombo yeendaba yaseSwitzerland
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » I-Seychelles yoKhenketho kunye neQatar Airways Yabelana ngoPhuculo oluNtsha neMithombo yeendaba yaseSwitzerland
Airlines • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Iindaba zaseQatar zokuqhekeka • Ukwakha kwakhona • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Seychelles yoKhenketho kunye neQatar Airways
I-Seychelles yoKhenketho kunye neqabane leenqwelo moya eQatar Airways baqinise iinzame zabo zokuqinisa ukubonakala kwendawo ekuya kuyo eSwitzerland ngokulungiselela intlanganiso nabahambi, amajelo eendaba, kunye neengcali zeshishini eZurich ngoLwesine, nge-23 Septemba.
Imisitho emibini ejolise ekugcineni amaqabane esazi malunga nokwenzekayo eSeychelles.
Izihloko zibandakanya amanyathelo okhuseleko, izinto ezintsha ezinomtsalane, kunye neendaba zamva nje ezivela eQatar Airways kunye neeshedyuli zenqwelomoya eSeychelles.
Iintlanganiso zibomelezile ubukho besizwe kwimarike kwaye zaqinisekisa amaqabane ukuba unxibelelwano kwiziqithi zalo ezincinci luyafumaneka.
Umnyhadala wobuntu, obubanjelwe eSavoy Baur en Ville eZurich, ubonise inkomfa noonondaba ebibanjelwe kwisidlo sakusasa, kunye nentlanganiso yesidlo sasemini etsala amaqabane eendaba ali-12 kunye nabaphathi bemveliso abali-15.
Ekhokelwe nguNksk Bernadette Willemin, uMlawuli-Jikelele weNtengiso ye Seychelles yoKhenketho, kunye noMnumzana Antonio Panariello, Umphathi wezoRhwebo eSwitzerland eQatar Airways, le misitho mibini ijolise ekugcineni amaqabane abo esazi malunga nokwenzekayo eSeychelles, amanyathelo okhuseleko, izinto ezintsha ezinomtsalane, kunye neendaba zamva nje ezivela kwiQatar Airways kunye neeshedyuli zenqwelomoya eSeychelles.
Ethetha eZurich, UNksk. Willemin uqinisekisile ukuba ezokhenketho zaseSeychelles zilungiselela isigaba esilandelayo sokubuyisela indawo esiya kuyo. Kwimpelaveki ephelileyo irekhodile undwendwe lwayo lwe-100,000 yonyaka.
“Njengokuba ubomi buhamba buya buhamba buqhelekile, ugonyo luyanda e-Yurophu, kwaye kwihlabathi jikelele kuthintelwa imiqobo yokuhamba nokuhamba. Iinqwelo-moya ziyaqhubeka kwakhona iinkonzo zazo kunye nabemi baseSeychelles bonwabela elinye lawona manqanaba aphezulu okugonya emhlabeni, ukhenketho lwaseSeychelles ngoku luyakwazi ukuqhubeka nemisebenzi yokukhuthaza kwikhalenda yayo. Zininzi izinto ezenzekayo kuzo zonke iimarike zethu. Umnyhadala wanamhlanje eSwitzerland, esiwubambe ngentsebenziswano neQatar Airways, kukuqinisa ubukho bethu kwintengiso kunye nokuqinisekisa amaqabane ethu ukuba unxibelelwano neziqithi zethu ezincinci luyafumaneka, utshilo uNkskz. Willemin.
U-Antonio Panariello, uManejala wezoRhwebo eSwitzerland eQatar Airways uthe: “Bekululonwabo olukhulu ukuba lapha namhlanje nokusingatha lo msitho kunye ne-Seychelles yezoKhenketho. Unxibelelwano phakathi kweQatar Airways kunye neSeychelles lomelele kwaye lubalulekile. Le ndawo inomdla kakhulu kwimakethi yaseSwitzerland, kwaye siyazingca ukuba singayazisa le ndawo sikunye neSychelles yoKhenketho. ”
Kwinqaku eliqinisekileyo, amajelo eendaba kunye namaqabane abekho kwimisitho yomibini bancoma urhulumente waseSeychelles kunye nomzi mveliso ngokubanzi ngokuhambelana kunye nezakhono zonxibelelwano ezigqwesileyo ngexesha lobhubhane.
Esi siganeko silandela uhambo lwakutsha nje e-Seychelles exhaswa yi-Qatar Airways Switzerland kwaye ixhaswe ngamaqabane ehotele iConstance Lemuria Resort, INDABA iSeychelles, iHilton Seychelles Northolme Resort & Spa kunye neKempinski Seychelles Resort.
I-Seychelles igqibezele ukuvulwa kwakhona kwemida yayo kubakhenkethi bamanye amazwe nge-25 ka-Matshi 2021. ISwitzerland kufuneka ibe kulo nyaka inikele nge-3% kwisabelo sentengiso sabo bonke abafikayo.